Забур 100 CARS - Nnwom 100 AKCB
1Mommɔ ose mma Awurade, asase nyinaa.
2Momfa ahosɛpɛw nsom Awurade;
momfa anigye nnwom mmra nʼanim.
3Munhu sɛ Awurade yɛ Onyankopɔn;
ɔno na ɔyɛɛ yɛn, na yɛyɛ ne de;
yɛyɛ ne nkurɔfo ne ne didibea nguan.
4Momfa aseda nhyɛn nʼapon mu,
na momfa nkamfo nkɔ nʼadiwo;
5Awurade ye; na nʼadɔe wɔ hɔ daa;
ne nokwaredi kodu awo ntoatoaso nyinaa so.
AKCB : Nnwom 100